Nagu saabsan - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
ku takhasusay R & D iyo wax soo saarka wax soo saarka caaryada iyo qalabka wax soo saarka mashiinada, waxaan soo saarnay cilmi baaris tayo sare iyo farsamo sare leh, horumarin, wax soo saar, koox adeeg iyo nidaam maamul, iyo waxsoosaarka la balaariyey oo ka badan 11 taxane mashiinada wax shiida, ilaa mashiinka mashiinka, farsamada gacanta, otomaatiga. Iyada oo alaabooyinka tayada gaarka ah iyo sumcadda astaan ​​u gaar ah, wax soo saarkayaga waxaa loo iibiyaa in ka badan 40 magaalo horumaray oo dhan Shiinaha, iyo sidoo kale in ka badan 20 dal oo adduunka oo dhan Asia, Europe iyo America.
Shirkadeena waxay qaadataa wax soo saarka tayada sare leh sida jihada, fikradaha R & D waa inay siiyaan macaamiisha wax soo saarka ugu tayada fiican, wuxuu noqday soo saare qalab mashiin xirfad leh oo leh shey dhameystiran oo caaryo ah iyo qalabka mashiinka qalabka lagu farsameeyo iyo karti awood leh oo loogu talagalay Shiinaha. .
Advantage Faa'iidada tayada: habka xakamaynta tayada oo faahfaahsan iyo habka hawlgalka kormeerka, tikniyoolajiyad wax soo saar heer sare ah, soodhawaynta heerka sare ee softiweerka iyo qalabka - si loo hubiyo in la helo xasilooni wax soo saar wanaagsan.
Advantages Faa'iidooyinka cilmi-baarista iyo horumarka: in ka badan 20 sano oo loo hoggaansamayo cilmi-baarista qotada dheer iyo roobab teknoolajiyadeed - waxay sameysay dabeecad ka dhigaysa waxqabadka guud ee qalabka mid ka wanaagsan, u qaabeynaya qalabka si deg deg ah oo sax ah, oo bixiya qalab iyo adeegsiga xalal dhammaystiran.
Hal-abuurnimada hal abuurka, patent-ka nooca utility, daraasiin daabacan software
ERP, CRM iyo nidaam kale oo maareyn macluumaad oo dhameystiran - si loo hubiyo in shirkadu si hufan u shaqeyso iyo horumar joogto ah.
Faa'iido gaar ah:
U sii macaamiisha wax soo saar habeysan oo wax ku ool ah
Macaamiisha la siiyaa taageero farsamo oo codsi ah oo ku saabsan alaabada CNC, oo ay ku jiraan caddeynta alaabada, barnaamijyada geedi socodka howsha, qaabeynta qalabka iyo soo saarista.
siiyaan macaamiisha caaryada ama qaybo ka baaraandegta qorshaha dhirta oo dhan qalabka dhirta, oo ay ku jiraan qorshayaasha qaybo ka baaraandegista, qalabka u dhigma.
U soo bandhig macaamiisha xalal isku dhafan oo loogu talagalay khadadka wax soo saarka otomaatiga ah, oo ay ku jiraan qalabaynta qalabaynta, otomaatiga rarka iyo dejinta, iyo otomaatiga gudbinta qalabka